musha / All Tops
Featured Best Nokutengesa Alphafabheti: AZ Alphafabheti: ZA Mutengo: Kuderera kusvika kuHotori Mutengo: Kumusoro kusvika kuChotera Zuva: Zvitsva kuenda kune Yekare Zuva: Yekare kuNew
Kukura Kwakawanda Kushanda Neck Asymmetric Split Tunic $42.00 $60.00
Muchena uye Muchena Wakagadziriswa Kuwedzerwa Kukuruka Mutsipa Dress $43.40 $62.00
Long Sleeves Asymetrical Cotton Shirt $46.90 $67.00
Asymetrical Layered Purple Shirt Dress Zvapera
Loose Plus Size Oversized Sweater Dress $37.80 $54.00
Yakasununguka Asymmetrical Plus Size T-shirt $47.60 $68.00
Oversized Batwing Shirt Yaken
Oversized Batwing Shirt Yaken $64.40 $92.00
Zvisina kukodzera V-Neck Long Sleeve Loose Blouse
Zvisina kukodzera V-Neck Long Sleeve Loose Blouse $37.80 $54.00
Yakareba Yemahombe Yakasvibiswa neCotton Shirt
Yakareba Yemahombe Yakasvibiswa neCotton Shirt $53.20 $76.00
Kutenga zvigwenga nguva dzose kunonakidza! Pasinei nokuti uri kutsvaga humwe hutenga hutsva hwokusvika kumhenderekedzo yegungwa kana kuti jira idzva rinosungirirwa muhombe apo uchiona firimu rako raunofarira rezororo, Buddhatrends inopa mikana yakasiyana-siyana uye t-shirts, shati dzakanyanyisa uye nezvimwe zvakawanda, zvichiita kutenga zvigaro izvo zvinonakidza zvikuru!
Iwe uchawana kuunganidza kwedu kwepamusoro kuti ive inoshamisa, inotangira uye pamwe nekunyaradza kune vose vatengi. Nemuenzaniso, wedu Sweater Dresses inoenda zvikuru pamwe chete neShirts Shirt Dresses kana iwe uri pangozi kune chimwe chinhu chokupfeka uye uchirova mukati uchienda ku cafe, kuenda kumafirimu, kana kunyange uchiita zvese zvezuva nezuva .
Zvinhu zvakadai seBlueses, T-shirts, Tank Tops, uye Cardigans zvese zvinogona kurira zvakanyanya, asi, pakutenga paBuddhatrends vanova zvakasiyana! Tinopa shanduro yedu Oversized Art Inspired Abstract Blouse somuenzaniso uye iri chigamba chikuru chokupfeka kumutambo wemimhanzi kana chero kuungana kwevanhu vakagadzirira uye vokutanga vasina kutya kumira kunze.
Zvose zviri pamusoro pepaiti yedu yakagadzirirwa vanhu vasingatyi kumira uye kutaura, asi, kumira kunze hakurevi kuti munhu anoda kuve akajeka. Hondo yedu yekutora inopawo zvimwe zvinhu zvisingabatsiri uye zvine mwero izvo zvichiri kuramba zvakasiyana kune mukadzi anoda kuwedzera mamwe mazwi akavanzika. Nhamba Yedu yeCotton neYinen Shirt isiri yakakwana ndiyo muenzaniso wakakwana kana mutengi achiverenga uyu ndiye mukadzi uyo ari kutsvaga kukwana kwakakwana kwe classicality uye kutanga.
Buddhatrends ine zvigadziro zvepamusoro zvinopa zvisarudzo kune vose vakadzi, avo vari nyore uye zvekare uye kune avo vakaoma uye vanotsvaka kutanga. Izvo zvose paunowedzera pfungwa yekuzorora sezvo pasina chidimbu chisina kusimba, uye, icho ndicho chakanaka chakanaka chekuunganidza kwepamusoro. "